Ọrụ - Recen Technology Co., Ltd.
Anyị nwere ike ịkwado gị iji dozie nsogbu ọ bụla site na oku vidiyo 24 * 7, anyị nwere ndị otu e kenyere aha maka nkwado oku na-akwado ndị ahịa n'ụwa niile site na isi ụlọ ọrụ anyị.Ndị otu ọkachamara anyị na-agbaso teknụzụ achọrọ iji dozie nsogbu.
Anyị na-enye onye ọrụ ahụ nrụnye na ọzụzụ zuru oke ka o wee ghọta usoro nchekwa nke ọma. Anyị dekọtara ntuziaka vidiyo maka ndị ahịa.'ntụaka nakwa.Injinia ọkachamara anyị nwere ike ịwụnye.Mgbe ngwaahịa rutere n'ọnụ ụzọ gị n'ime ụbọchị abụọ nke oge, onye na-ahụ maka ọrụ anyị ga-anọ na saịtị gị iji mee ntinye.
Nye n'efu ọzụzụ teknụzụ maka ndị ọrụ na ndị ahịa anyị,Anyị na-agakarị ndị ahịa si mba ofesi'ụlọ ọrụ na oru ngo saịtị iji nye ụlọ ọzụzụ n'efu na na-akụziri ha gbasara nchekwangwaọrụnke cranes.Ọzụzụ a na-enye aka na ọzụzụ nye ha na ihe ngosi zuru oke maka nghọta ka mma.
Nchekwa Ugo elu Tower Crane, Mobile Crane Qatar, Ngosipụta oge ibu, Ihe ngosipụta oge ibu crane Tower, Chọrọ nchekwa nchekwa ụlọ elu crane, Sistemụ nchikota maka ụlọ elu crane,